Meydka 2 nin oo shacab ah oo laga helay duleedka Bari ee magaalada Galkacyo. – Radio Daljir
Meydka 2 nin oo shacab ah oo laga helay duleedka Bari ee magaalada Galkacyo.
Seteembar 27, 2009 12:00 b 0
Galkacyo, Sept 27 – Waxaa xalay saqdii dhexe laga helay duleedka Bari ee magaalada Galkacyo Meydka labo nin oo shacab, oo ay ku yaalliin dhaawacyo rasaaseed. Labada nin ee la dilay ayaa la tilmaamay in ay walaalo ahaayeen, kuwaasi oo la waayey duhurnimadii Sabtida ahayd ee shalay, waxaana Meydkooda xalay bileyska ku soo war-galiyey dad marayey goobta lagu toogtay oo ku taalla meel u dhaxaysa Airportka magaalada iyo Kaamka lagu magacaabo Tawakal.
Raggaan la laayey ayaa ahaa dad xamaalato ah oo degganaan-jiray Kaam Qaxooti oo isna ku yaalla Galbeedka magaalada Galkacyo, kaasi oo lagu magacaabo Buulo-Koontarool, waxaana wararku ay sheegayaan in laga taxaabtay magaalada xilli ay ku guda-jireen shaqooyinkoodii caadiga ahaa.
Shiikh Xasan Cali Nuur, oo ka mid ah eheladii labada nin ee walaalaha ahaa ee la dilay ayaa idaacadda Daljir u sheegay in aysan garanayn cidda ka danbaysay falkaasi, isla markaana aysan jirin wax danbi ah oo ay ehelo ahaan ogaayeen in ay galeen raggaas.
Shiikh Xasan, waxaa uu intaasi ku daray in ay aad uga murugoonayaan dhacdadaasi, hase ahaatee ay ku kalsoon-yihiin baaritaano ciidanka bileysku ay wadaan oo ku aaddan ciddii ka danbaysay dhacdadaasi, isla markaana ay ka warsugayaan.
Guddoomiyaha gobolka Mudug Axmed Caali Salaad, oo isna idaacadda Daljir uga warramay falka lagu dilay labada nin ee walaalaha ah, ayaa sheegay maamul ahaan in ay u tacsiyeynayaan ehelladii ay ka geeriyoodeen raggaas, waxaana uu intaasi raaciyey in ay gacanta ku soo dhigi-doonaan dadkii falkaasi gaystay isla markaana ay cadaaladda hor-keeni doonaan.
Dhinaca kale taliyaha Qaybta bileyska ee gobolka Mudug G/le sare Muuse C/raxmaan ?Muuse Xasaasi? ayaa idaacadda Daljir u xaqiijiyey in ay wadaan baaritaano ay ku hubsanayaan dadkii falkaasi ka danbeeyey, wuxuuna sheegay in ay hadda hayaan caddaymo hor-dhac ah oo muujinaya ciddii falkaasi gaysatay.
Taliyuhu wuxuu ka gaabsaday in uu faah-faahin dheeraad ah bixiyo, hase ahaatee wuxuu sheegay saacadaha soo socda in ay soo bandhi-doonaan isla markaana ay saxaafadda u sheegi doonaan sidii ay wax u dhaceen.
Ma?ahan markii ugu horraysay oo duleedka magaalada Galkacyo laga soo qaado meyd sidaan oo kale loo dilay, waxaana ay tani qayb ka tahay falalka ammaan darro ee inta badan ka dhaca magaalada Galkacyo.
Kooxda Kubada cagta Daljir oo casumaad u fidisay kooxo ka socda Garowe iyo Gaalkacyo.